Alexandre Lacazette Oo La Weydiiyay Haddii Uu Mustaqbalkiisa Arsenal Ku Xidhan Yahay Midka Aubameyang & Jamaahiirta Gunners Oo War Cad Helay - Gool24.Net
Alexandre Lacazette Oo La Weydiiyay Haddii Uu Mustaqbalkiisa Arsenal Ku Xidhan Yahay Midka Aubameyang & Jamaahiirta Gunners Oo War Cad Helay
Weeraryahanka kooxda Arsenal ee Alexandre Lacazette ayaa ka hadlay mustaqbalka kooxdiisa iyo haddiiba go’aanka uu kaga tagayo waqooyiga London uu ku xidhan yahay midka kabtankiisa Pierre Emerick Aubameyang.
Taageerayaal badan oo Arsenal ah ayaa ka cabsi qaba in kulanka caawa ee Final-ka FA Cup-ka ee ay kahor tagayaan Chelsea uu noqon doono kulankii ugu dambeeyay ee uu Aubameyang kooxdooda metelo.
Weeraryahanka ree Gabon ayay isha ku hayaan kooxo ay kamid yihiin Inter Milan iyo Barcelona, haddiiba uusan saxeexin heshiis cusub ayay Arsenal amaba bilaash ku waayi doonaa xagaaga 2021 ama ay suuqa xagaagan deg deg u iibin doontaa.
Lacazette ayay sidoo kale hadal hayn badani ka taagnayd mustaqbalkiisa xilli ay kaliya laba sano ka hadheen heshiiska uu ku joogo Emirates Stadium.
Haddaba, kahor kulanka caawa ayuu Lacazette sheegay in isaga mustaqbalkiisa iyo midka Auba aysan gabi ahaanba waxba iskaga xidhnayn taas oo ka farxisay taageerayaasha Gunners ee filayay inay isku xidhnaan doonaan.
Alexandre oo ka jawaabaya su’aashaas ayaa yidhi “Maya, sababtoo ah waanu ognahay in Auba uu wadahadalo badan la yeeshay kooxda aniguna mustaqbalkayga kuma xidhi karo qof kale kiisa.
Dhinaca kale Lacazette oo ka hadlaya xidhiidhkooda ayaa yidhi “Markii uu yimid qofkasta wuu ogaa inaanu xidhiidh wanaagsan wadajir u yeelanayno”
“Markasta waanu ka wadahadalnaa waxkasta, maaha kaliya kubadda cagta laakiin waxkasta oo nolosha ah, isagu waa nin wanaagsan”